Caalamka Online » Ciidamadii Faara badan oo ku wajahan deegaanka Tukaraq
Ciidamadii Faara badan oo ku wajahan deegaanka Tukaraq
Wararka Naga soo gaaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamadii iyo Tiknikadii ugu badnayd ee Beelaha Daarood ay ku sii qul qulaayaan deegaanada Gobalka Sool ee Maamulka Puntland ka arimiyo.
Beesha Tanade Layla kase oo horay uga Baxday Maamulka Puntland ayaa ciidamo gaadhaya 500 oo askari u qoon daysay wajigii koowaad ee hawlgalka dibu xoreynta gobolka Sool soda uu soo sheegayo wariyaheena ku dhaqan Xaafada Garsoor Magaalaada Gaalkacayo,.
waxana Kamid ah Ciidamaya Gaaraya Goobta dagaalka Ciidamo ilaa 300 boqol oo askari ahoo kuwaas oo ku Hubaysan Gawaarida gaashaaman iyo gaadiidka kale ee dagaalka, waxaana laga dareemayaa Markaaan Saan saanata Colaaada iyo hubka noocyadiisa kala ay duwan oo la isku aruursanayo.
Ujeedka ciidamadani ayaa ah sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah ciidamada Militariga Somaliland ee Xooga kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Sool oo horay ay umaamulaysay Puntland.
Sidoo kale hawlgalkaasi qayb ka ahaan doona ciidamo ka socda Beesha Sadde Daarood (Maxeeraan) kuwaas oo iyaguna kusoo wajahan maalmaha soo socda magaalada Garoowe ee caasimada Puntland oo ay uga sii gudbi doonaan dhanka jiidaha hore ee dagaalka.
Jiidaha hore ee dagaalka ayaa waxaa haatan ku sugan ciidamo ka socda Beesha Ugaadh yahan Siyaad oo kamid ah Beelaha ugu Miisaanka weyn Beel weynta Dhulbahante, iyadoo Beelaha kale ee Dhulbahante laga sugayo in ay ka qayb qaataan xoraynta deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn isla markaasna iyagana ciidamo aad u badan laga filayo.